कोरियन चर्चित नायिकाहरु कति कमाउछन?थाहा पाउदा होस उडछ ! – Kantipur Press
अहिले दक्षिण कोरियाली ड्रामाहरु विश्वभनर प्रख्यात रहेका छन। कोरियाली संस्कृति विश्वभर फै’लिएसँगै यसका कालाकारहरुको तलब पनि बढ्दै गइरहेको देखिन्छ। कोरियाका नायक नायिकाहरुले कति कमाउलान त? धेरैलाई यो बिषयमा जान्ने इच्छा हुन सक्दछ।
अहिले कोरियाका प्रख्यात नायिकाहरुले ड्रामामा अभिनय गरेको प्रति एपिसोडको २ सय मिलियन वन अर्थात करिब १ लाख ७० हजार डलर लिने गरेको पाइएको छ।
कोरियाएको एक प्र’ख्यात पत्रिका हानकुक इल्बोका अनुसार कोरियाका प्र’ख्यात नायिकाहरु सोङ हे क्यो र जुन जि ह्युन जसका ड्रामा हरु अहिले प्रसारण भइरहेका छन उनिहरुले प्रति एपिसोट ड्रामा मा अभिनय गरेको २ सय मिलियन वन लिने गरेका छन।
सोङले अहिले प्रसारण भइरहेको एसबिएसको मेलोड्रामा ‘नाउ वि आर ब्रे’कि’ङ अप’ मा अभिनय गरेकी छिन भने जुन ले टिभि एन को मिस्ट्रि सिरिज ‘जिरीसन’ मा अभिनय गरेकी छिन।
जुन पनि एसबिएसको मेगा हिट रोमान्टिक कमेडी ‘माइ लभ फ्रम द स्टार’ मा मुख्य नायिकाका रुपमा अधिनय गर्दा प्रति एपिसोड १० करोड वन लिएको बुझिएको छ। यो ड्रामा सन २०१३ मा प्रसारण भएको थियो। उनि धेरै समय सम्म विभिन्न टिभी कमर्सियलहरुमा प्रमुख पात्रका रुपमा देखिएकि थिइन।
हानकुक इल्बोका अनुसार कोरियामा नायक र नायिकाले पाउने तलबमा धेरै अन्तर रहेको पाइन्छ। केहि नायिकाहरुले मात्र प्रतिएपिसोड १० करोड वन तलब पाउने गरेका छन तर धेरैजसो नायकहरुले यो तलब सजिलै पाएको देखिन्छ।ईपिएस साथी